काम अवसर खोज्न | USAHello देखि काम स्रोतहरू | USAHello
तपाईं कहाँ काम खोज्न जान्न आवश्यक? जहाँ अनलाइन र आफ्नो समुदायमा काम अवसर खोज्न जान्न. एक काम वर्णन कसरी बुझ्न पत्ता.
त्यहाँ लागि जब हेर्न धेरै तरिकाहरू छन्. तपाईं हेर्न एक वा यी तरिकामा सबै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
आफ्नो छिमेकी मा काम को अवसर खोज्न
तपाईं आफ्नो छिमेकी वरिपरि हिंड्न र भन्न कि संकेत लागि नजिकै कारोबार को Windows मा हेर्न सक्छन् "वन्टेड मद्दत गर्नुहोस्।" यो व्यापार कर्मचारीहरु लागि देख छ मतलब.
एक रोजगार केन्द्र मा साइन अप
सबै शहर रोजगार केन्द्र तपाईं काम को लागि खोज सहायता भनेर. फेला आफ्नो निकटतम रोजगार केन्द्र. तपाईं शरणार्थी छन् भने, तपाईं resettlement एजेन्सी पनि आफ्नो पहिलो काम खोज्न मदत गर्नेछ. तिनीहरूले तपाईं आफ्नो पहिलो काम पाउन मदत यदि, तपाईंले तिनीहरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ तपाईँ नयाँ काम खोजिरहेको. तिनीहरूले फेरि तपाईंलाई मदत गर्न सक्षम हुन सक्छ.
काम अवसर को लागि खोज अनलाइन
कामको लागि अनलाइन देख को लाभ तपाईं आफ्नो काम खोज संग विशिष्ट हुन सक्छ कि छ. के तपाईं चाहनुहुन्छ जब र करियर अवसर को सही प्रकारको लागि हेर्न सक्छन्. काम अनुसन्धान, स्थान, र तपाईं को लागि सबै भन्दा राम्रो हो कि घण्टा. तपाईं एक कम्प्युटर छैन भने, तपाईं सार्वजनिक पुस्तकालय मा निःशुल्क कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
कम्प्युटर सीप सिक्ने
कामको लागि अनलाइन देख मान्छे कम्प्युटर प्रयोग गर्न नयाँ लागि गाह्रो हुन सक्छ. तिमी सक्छौ आधारभूत कम्प्युटर सीप सिक्न वा तपाईँले खोजी गर्न सक्नुहुन्छ FindHello तपाईंको शहर वा शहरमा कम्प्युटर कक्षाहरू लागि.
रोजगार वेबसाइट प्रयोग
तपाईं अनलाइन काम अवसर खोजी गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ केही वेबसाइटहरूले छन्. यी काम खोज वेबसाइट को सबै तपाईं काम अलर्ट लागि साइन अप गर्न को लागि विकल्प. तपाईं आफ्नो इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् यदि, जब जब चासो आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध अपडेट प्राप्त हुनेछ.
साँच्चै आफ्नो शहर मा नोकरी को लागि खोजी गर्ने राम्रो वेबसाइट. आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ जब खोज्नको लागि आफ्नो शहर प्रविष्ट गर्नुहोस्.
Idealist एक वेबसाइट नाफारहित जब धेरै छ. शरणार्थी कहिलेकाहीं जब अन्य शरणार्थी मदत गर्न काम पाउन सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईँले एक भन्दा बढी भाषा बोल्न.
राक्षस तपाईं नयाँ जब सूची इमेल अपडेट लागि साइन अप गर्न अनुमति दिन्छ. तपाईं एक काम को लागि देख रहे भने, यो राक्षस जस्तै एक वेबसाइट को एक सदस्य बन्न एक राम्रो विचार छ.
LinkedIn लागि जब लागू गर्न कम्प्युटरमा वा तपाईको फोनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. तपाईं चाहनुहुन्छ शीर्षक खोजी र आफ्नो योग्यता मेल खाने कुनै पनि स्थिति को लागि लागू.
काम अवसर तपाईंलाई मदत गर्नेछ एक LinkedIn प्रोफाइल कसरी बनाउने सिक्न
CareerBuilder तपाईं नोकरी पहुँच र आफ्नो रिजुम साझेदारी गर्न खाता सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ. तपाईं आफ्नो काम खोज र व्यावसायिक विकास मा सल्लाह प्राप्त गर्न सक्छन्.
सिसाको ढोका रुचि आफ्नो क्षेत्रमा हालैको काम अवसर पाउन दिन्छ. तपाईं पनि सम्भावित हाकिमहरूले समीक्षा तलब बारेमा जानकारी साथै पाउन सक्नुहुन्छ.
USjobs जहाँ तपाईं राज्य सरकार जब लागि हेर्न सक्छन् एक वेबसाइट. काम नागरिकता आवश्यक भने हेर्न आवेदन गर्नु अघि हरेक पोस्ट जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्.
USAjobs अमेरिकी नागरिकता गर्नेहरूलाई लागि हो. यो संघीय लागि राम्रो स्रोत हो (अमेरिकी सरकार) जब. तपाईं पहुँच र सबै संघीय निकायहरूबाट नोकरी लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ.
ZipRecruiter तपाईं कम्प्युटरमा वा तपाईको फोनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अर्को स्रोत हो. तपाईं प्रोफाइल पूरा हुनेछ, जो आफ्नो व्यावसायिक पृष्ठभूमि र चासो समावेश. तपाईं जब जब उपलब्ध अद्यावधिक प्राप्त गर्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ. यो बाटो, क्यारियर अवसर तपाईं सीधा आउन.
एक काम वर्णन बुझ्न
रूपमा काम अवसर खोज्न, तपाईं काम वर्णन बुझ्न आवश्यक हुनेछ. तपाईं काम को लागि एक राम्रो फिट छन् भने थाहा, तपाईं काम को लागि योग्यता पाउन चाहनुहुन्छ हुनेछ.
जस्तै शब्द र वाक्यांश खोज्न न्यूनतम, हुनै पर्छ, हुनै पर्छ, सक्षम हुनुपर्छ, आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक, आवश्यकताहरु, र कमसेकम. यो तपाईं के कौशल फेला पार्न मद्दत गर्नेछ, अनुभव र शिक्षा काम प्राप्त गर्न आवश्यक छ.
यो तपाईं काम को लागि योग्यता को राम्रो समझ छ कि धेरै महत्वपूर्ण छ. के तपाईं पक्का लागू अघि योग्यता गर्नुपर्छ. के तपाईं बुझ्न देखाउने र स्थिति को लागि योग्यता हुन सक्छ भने, तपाईं एक साक्षात्कार प्राप्त गर्न राम्रो मौका र काम प्राप्त हुनेछ.
व्यापार र कार्यस्थल अंग्रेजी मा निःशुल्क अनलाइन कक्षा लिन
सँगै व्यावसायिक उल्लेख सूची राख्न
कसरी रिजुम बनाउन